Jarmalka - La soco magaalooyinkeeda waaweyn iyo geesaha gaarka ah | Safarka Absolut
Jarmalka waa wadan ka tirsan Yurub caasimadiisuna waa Berlin. Waxaa ku nool in ka badan 83 milyan, waa mid ka mid ah waddamada ugu badan ee ku nool Midowga Yurub. Marka si guud loo eego, waxaa naga haray inay tahay dal leh nolol heer sare ah waana inay ka dhex muuqato qeybaha qaar sida teknolojiyadda iyo sayniska.
Waxay leedahay taariikh dheer gadaasheeda mana ahayn ilaa qarnigii XNUMXaad in Jarmal runti looga hadlo dowlad ahaan. Marka laga tago dhinaceeda siyaasadeed, waxaa nalooga tagay wax kasta oo uu nooga tago gees walba, oo aan yareyn. Waxay leedahay qaabab badan oo isku dhafan oo ka mid ah qaab dhismeedkeeda, wax had iyo jeer ka sarreeya wax kasta oo kale. Sidaa darteed, mid ka mid ah booqashooyinka ugu horreeya waxay noqon doontaa Qasriga Neuschwanstein, oo ku yaal Bavaria waana mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaynaan seegin. Midkoodna Munich ama xaruntiisa taariikhiga ah ama aagga Xarunta Dawladda Hoose. Ka gudbaya Bremen iyo Dresden.
Waan soo sheegnay waana Berlin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan ku raaxeysano Albaabka Brandenburg ama Darbiga Berlin iyo Cathedral. Calaamadaha markasta loo baahan yahay inay noqdaan halyeeyo ku socdaala socdaalkayaga. Dabcan, haddii aad doorbideyso xoogaa xasillooni iyo inaad la xiriirto dabeecadda, markaa ha iloobin Selva Negra. Keymo aad u qaas ah! Qasriyadaha, qalcadaha iyo aragtiyada gaarka ah, waxaad ka heli doontaa waxa loogu yeero 'Jidka Jacaylka'.
by Luis Martinez samee Bilaha 12 .
Bandhigga goosashada waa dabbaaldeg mahadcelin ah oo ku baahsan adduunka. Asalkiisu wuxuu ka soo bilaabmay ...
Maxaa lagu arkaa Munich?
Maxaa lagu arkaa Munich? Waa su'aal la isweydiiyo yaa qorsheynaya safar uu ku tago Bavaria, oo ka mid ah gobollada Jarmalka ...
Rumayso ama ha rumaysan, caasimadda Jarmalka waxay leedahay waxyaabo aan dhammaad lahayn oo la bixiyo. Taasi waa sababta markaan ...
Dadka taariikhda jecel waxay helayaan xilligii dhexe, ama kii qarniyadii dhexe, mid ka mid ah kuwa ugu ...
Oberammergau waa magaalo ku taal Bavaria, Jarmalka. Waxaad ka heli kartaa dooxada Cammer wabiga, waayo ...
Haddii aad tagto jardiinada 'Disney theme park', waxaad isla markaaba aqoonsan doontaa qalcadda weyn ee casaanka ah ee dhiirrigelisay Quruxda Hurdada. Si kastaba ha noqotee,…
by Susana godoy samee 3 sano .
Waxaan tegeynaa caasimada Jarmalka. Berlin waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan Bartamaha Yurub. Waxa kale oo lagu tiriyaa ...
Koonfurta Bavaria, Jarmalka, waxaan ka helnaa Qasriga Neuschwanstein. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah qodobbada ...
by maruuzen samee 5 sano .
Qasriyadu waa qaab dhismeedka difaaca dhexe ee warshadaha dhaqanku u rogeen dhismayaal jacayl, sheeko xariirooyin. Waa maxay…
by Jarmal Absolut samee 9 sano .